faayidaa cuunfaa loomii – Fana Broadcasting Corporate
faayidaa cuunfaa loomii
Finfinnee, Qaammee 5,2010(FBC)- Bu’aan qorannoolee hedduu akka addeessutti cuunfaan loomii Vaayitamiin C dhaan kan badhaadhefi madda Vaayitamiin C isa guddaa ta’uun sirni ittisa qaamaa keenya akka jabaatu godha.
Nyaata qaaman hin bullofne (Fiber) guddaa waan of keessaa qabuuf gogiinsa garaa hanbisuu, ulfaatinna qaamaa hirdhisuufi fayyummaa mar’umaan guddaa keenyafis gaariidha..
Bulla’insa nyaataa saffisiisufi oomisha hadhooftu(bile) kan bulla’insa Lipiidiif (coomaaf zayitaaf) barbaachisu ni si’eessa.
Bu’aa walnyaatinsa keemikaala qaamaa ta’anii isaan qamaaf hin barbachifne bulbuluu irrattis gahee qaba.
Dabalataan madda albuudota akka pootashiyeemii, maagniziyeemii, kaalshiyeemii, fosfarasii fa’a ta’uunis ni beekama, Kun ammoo sirna narvii kunuunsuufi dhiibba dhiigaa hirdhisuu irratti gahe gudda qaba.
Baakteriyootn dhukkuba fidan hedduun akka wal hin horre ittisuu irratti gahee guddaa taphata.
Dhukkubbi nannoo jilbaa, ciqilee, fi naanno lafeen walitti dhufu (joint) namatti dhagahamu tokko tokko ni hirdhisa.
Uttaalloo ,gubaa laphee woyyeesuu ykn fayyisuufis ni tajaajila
Kormammuu fi gogaan keenyas akka walitti hin shunturoofne ni godha.
Fayyummaa ija keenyaafis barbaachisaadha.
Tola ooltonni Swiidin deeggarsa yaala onnee laachaa jiru
Baakteeriyaan fageenya maayiloota kumaatamaan lakkaa’aman qilleensaan dhiibamee…
Guyyaan dhibee sombaa idil addunyaa sadarkaa biyyaalessaatti yeroo 22ffaaf magaalaa…
Faalamni qilleensaa maseenummaaf nama saaxila-qorannoo